အသည်းကွဲပြီးနောက်. . . – Shinyoon
အသည်းကွဲပြီးနောက်. . .
ခဈြတတျတဲ့ နှလုံးသားတှေ ရှိနသေမြှတော့ … နာကငျြရတဲ့ အခိုကျအတနျ့တှေ ရှိနဦေးမှာပါပဲ ။ တှဆေုံ့ခွငျးတှေ ရှိနသေေးသရှေ့ … လမျးခှဲခွငျးတှလေဲ ရှိနဦေးမှာပါပဲ ။ ရစေကျကုနျလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ ဝဋျကွှေးကုနျလို့ပဲ ဖွဈဖွဈ …ကြှနျမတို့ တဈယောကျနဲ့တဈယောာကျ ခှဲရ ကှာရဖူးတာပါ…အဲ့လို ခှဲခှါရတဲ့အခါ အနညျးနဲ့အမြားတော့ … အသညျးကှဲရတာပါပဲ ။
အသညျးကှဲတဲ့အခါ … နာကငျြရတယျ … မကျြရညျတှကေရြတယျ ။ ဘာမှ မဖွဈပါဘူး မခံစားရပါဘူးလို့ နှုတျက ဘယျလောကျပဲ ငွငျးငွငျး စိတျထဲမှာတော့ ခံစားရတာပါပဲ ။ အသညျးကှဲတဲ့အခါ တဲ့ အငျး ကြှနျမ ကိုယျ၌ကလဲ အသညျးတှေ ကှဲခဲ့ဖူးသလို သညျးသညျးထနျထနျ ငိုကွှေးခဲ့ရဖူးတယျ ။ ဘာလို့လဲ ကိုယျက ခဈြခဲ့တာကိုး ။
မငိုခငျြပဲ ကနြတေဲ့မကျြရညျတှကေို တားနိုငျတဲ့ … အငျအားတှေ မရှိခဲ့ဘူး .. ဘယျလိုတားရမလဲဆိုတာလဲ မသိခဲ့ဘူး … အဲ့ဒီအခြိနျမှာ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ မေးခှနျးတှနေဲ့ နာကငျြနရေတာကိုပဲ သိခဲ့တယျ ။ အဲ့ဒီထကျ ဘာမှ ပိုပွီး မတှေးတတျ မသိခဲ့မိဘူး ။
အဲ့လို အသညျးကှဲခဲ့ရပွီးတဲ့နောကျမှာ … ကြှနျမ နောငျတရတတျလာတယျ … ငါဘာလို့ အခြိနျတှေ ဖွုနျးခဲ့မိပါလိမျ့ဆိုပွီးနောငျတတှေ ရလာခဲ့တယျ . ပွီးတော့ .. ကိုယျ့ကိုယျကို အရငျကထကျ ပိုပွီး တနျဖိုးထားတတျတယျ ။ အခဈြလား … အရငျတုနျးကလောကျ ရငျမခုနျတတျတော့ဘူး ။ သငျခနျးစာတှေ ယူတတျခဲ့တယျလို့ပဲ ထငျပါတယျ ။ သူစိမျးတဈယောကျပဲလဆေိုတဲ့အတှေးနဲ့ အရမျးကွီး မမြှျောလငျ့တတျတော့ဘူး ။ အပွုံးတှလေဲ အရငျကထကျ ပိုပွီး သဈလှငျတောကျပလာတယျလို့ ထငျတယျ ။ နှကွေောငျ့ ကွှသှေားတဲ့ သဈပငျတှေ မိုးရာသီအစမှာ အဖူးတှေ အပှငျ့တှေ ဝလောခဲ့သလိုပေါ့ ။ မကျြရညျတှကေပြွီးတဲ့နောကျမှာ အပွုံးတှကေ အရငျကထကျ ပိုပွီး အသကျဝငျလာတယျလို့ ထငျတယျ ။
အသညျးကှဲပွီးတဲ့နောကျမှာ … ရငျ့ကကျြလာတယျဆိုတာထကျ ကြှနျမ တဖွေးဖွေးနတေတျလာတယျ ။ ကိုယျမဟုတျတဲ့ တခွားတဈယောကျကို ကိုယျကိုယျတိုငျလောကျ အားကိုးမနတေော့ဘူး ။မြှျောလငျ့မနတေော့ဘူး … ပြျောအောငျထားမယျ့လကျတဈစုံကို မြှျောနတောထကျ ကိုယျကိုယျတိုငျပဲ ပြျောအောငျနဖေို့ အကောငျးဆုံး နညျးလမျးလေးကိုရှာတယျ ။ ပွီးတော့ ကိုယျနဲ့ မထိုကျတနျလို့ လှဲခဲ့ဖူး ကှဲခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတျကို ခဏခဏပွနျတှေးပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အပွဈတငျမနတေော့ဘူး ။
ချစ်တတ်တဲ့ နှလုံးသားတွေ ရှိနေသမျှတော့ … နာကျင်ရတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေ ရှိနေဦးမှာပါပဲ ။ တွေ့ဆုံခြင်းတွေ ရှိနေသေးသရွေ့ … လမ်းခွဲခြင်းတွေလဲ ရှိနေဦးမှာပါပဲ ။ ရေစက်ကုန်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၀ဋ်ကြွေးကုန်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် …ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောာက် ခွဲရ ကွာရဖူးတာပါ…အဲ့လို ခွဲခွါရတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများတော့ … အသည်းကွဲရတာပါပဲ ။
အသည်းကွဲတဲ့အခါ … နာကျင်ရတယ် … မျက်ရည်တွေကျရတယ် ။ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး မခံစားရပါဘူးလို့ နှုတ်က ဘယ်လောက်ပဲ ငြင်းငြင်း စိတ်ထဲမှာတော့ ခံစားရတာပါပဲ ။ အသည်းကွဲတဲ့အခါ တဲ့ အင်း ကျွန်မ ကိုယ်၌ကလဲ အသည်းတွေ ကွဲခဲ့ဖူးသလို သည်းသည်းထန်ထန် ငိုကြွေးခဲ့ရဖူးတယ် ။ ဘာလို့လဲ ကိုယ်က ချစ်ခဲ့တာကိုး ။
မငိုချင်ပဲ ကျနေတဲ့မျက်ရည်တွေကို တားနိုင်တဲ့ … အင်အားတွေ မရှိခဲ့ဘူး .. ဘယ်လိုတားရမလဲဆိုတာလဲ မသိခဲ့ဘူး … အဲ့ဒီအချိန်မှာ ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ နာကျင်နေရတာကိုပဲ သိခဲ့တယ် ။ အဲ့ဒီထက် ဘာမှ ပိုပြီး မတွေးတတ် မသိခဲ့မိဘူး ။
အဲ့လို အသည်းကွဲခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာ … ကျွန်မ နောင်တရတတ်လာတယ် … ငါဘာလို့ အချိန်တွေ ဖြုန်းခဲ့မိပါလိမ့်ဆိုပြီးနောင်တတွေ ရလာခဲ့တယ် . ပြီးတော့ .. ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ကထက် ပိုပြီး တန်ဖိုးထားတတ်တယ် ။ အချစ်လား … အရင်တုန်းကလောက် ရင်မခုန်တတ်တော့ဘူး ။ သင်ခန်းစာတွေ ယူတတ်ခဲ့တယ်လို့ပဲ ထင်ပါတယ် ။ သူစိမ်းတစ်ယောက်ပဲလေဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အရမ်းကြီး မမျှော်လင့်တတ်တော့ဘူး ။ အပြုံးတွေလဲ အရင်ကထက် ပိုပြီး သစ်လွင်တောက်ပလာတယ်လို့ ထင်တယ် ။ နွေကြောင့် ​ကြွေသွားတဲ့ သစ်ပင်တွေ မိုးရာသီအစမှာ အဖူးတွေ အပွင့်တွေ ဝေလာခဲ့သလိုပေါ့ ။ မျက်ရည်တွေကျပြီးတဲ့နောက်မှာ အပြုံးတွေက အရင်ကထက် ပိုပြီး အသက်ဝင်လာတယ်လို့ ထင်တယ် ။
အသည်းကွဲပြီးတဲ့နောက်မှာ … ရင့်ကျက်လာတယ်ဆိုတာထက် ကျွန်မ တဖြေးဖြေးနေတတ်လာတယ် ။ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြားတစ်ယောက်ကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လောက် အားကိုးမနေတော့ဘူး ။မျှော်လင့်မနေတော့ဘူး … ပျော်အောင်ထားမယ့်လက်တစ်စုံကို မျှော်နေတာထက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ ပျော်အောင်နေဖို့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းလေးကိုရှာတယ် ။ ပြီးတော့ ကိုယ်နဲ့ မထိုက်တန်လို့ လွဲခဲ့ဖူး ကွဲခဲ့ဖူးတဲ့ အတိတ်ကို ခဏခဏပြန်တွေးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်တင်မနေတော့ဘူး ။
ကိုယျ … အကူအညီလိုခဲ့တုနျးက … ငွငျးခဲ့တဲ့သူတှကေို တကယျကြေးဇူးတငျတယျ
လူတဈယောကျကို ဘယျတော့မှ စိတျနာအောငျမလုပျနဲ့